ब्रम्हा मुहूर्तको समय र महत्व के छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
सबेरै उठ्नुपर्छ भनिन्छ । अर्थात बिहान सबेरै उठ्दा स्वास्थ्यलाई अरु बढी लाभ मिल्छ भनिन्छ । बिहान उठ्दा के हुन्छ ? बिहान कतिबेला उठ्नुपर्छ ? बिहान उठ्ने सही समय के हो ?
किनभने अहिले हाम्रो जीवनशैली अस्तव्यस्त छ । हामी राती अबेरसम्म बस्छौं । बिहान झलमल्ल घाम लागिसक्दा पनि हामीलाई निद्राले छाडेको हुँदैन । त्यसैगरी कतिपयलाई अनिद्राको समस्या पनि छ । कोल्टे फेर्दाफेर्दै रात गुज्रन्छ, बिहान चाडै उठ्नै सक्दैनन् ।
पूर्खाहरुले भनेका छन्, राती चाडै सुत्नु, पर्यात निद्रा लिनु र बिहान चाडै उठ्नु । सुत्ने र उठ्ने समयावधी सात वा आठ घण्टाको हुनुपर्छ । यत्तिका अवधी गहिरो निद्रा लिनुपर्छ । गहिरो निद्रा लिनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, जति शुद्ध पानी, शुद्ध वायु, पोषिलो खानेकुरा ।
त्यसैले विहान चाडै उठ्नका लागि राती सुत्ने तालिका पनि मिलाउनुपर्छ । सुत्ने र उठ्ने तालिका नियमित हुनुपर्छ । बिहान खासगरी सूर्योदय हुनुअघि नै हामीले ओछ्यान छाड्नुपर्छ । यो समयलाई ब्रम्हा मुहूर्त भनिन्छ ।
२४ घण्टामा ३० मुहूर्त हुन्छ । ब्रम्हा मुहुर्त रातीको चौथो प्रहार हो । सूर्योदयको अगाडिको प्रहारमा दुई मुर्हुत हुन्छ । त्यसमा पहिलो मुहूर्तलाई ब्रम्हा मुहूर्त भनिन्छ । दिन–रातको ३० औं भाग मुहूर्त भनिन्छ । अर्थात २ घटी वा ४८ मिनेटको कालखण्ड मुहूर्त कहलिन्छ । त्यसपछि विष्णुको समय सुरु हुन्छ, जबकी बिहानीको लाली छाइरहेको हुन्छ तर सूर्य देखिदैन । हाम्रो घडी अनुसार प्रात ४ः२४ देखि ५ः१२ को समय ब्रम्हा मुहूर्त हो ।
ब्रम्हा मुर्हुतमा के गर्ने ?
ब्रम्हा मुर्हुतमा ४ वटा कार्य गरौं । एक सन्ध्या वन्दन, दुई ध्यान, तीन प्राथना र चार अध्यायन । वैदिक रीतिबाट गरिएको सन्ध्या वंन्दन सबैभन्दा उचित हो । त्यसपछि प्रार्थना गरौं । विद्यार्थी वर्गले सन्ध्या वन्दनपछि अध्ययान गर्नुपर्छ । अध्ययनका लागि यो सर्वोत्तम समय हो । सन्ध्या वन्दन भनेको प्रकृति र ईश्वरप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नु हो । कृतज्ञताले सकारात्मकताको विकास हुन्छ । यो प्रार्थना, ध्यान गर्ने समय हो ।
ब्रम्हा मुहूर्तमा के नगर्ने ?
ब्रम्हा मुहूर्तमा नकारात्मक विचार, वहस, वार्तालाभ, संभोग, निद्रा, भोजन आदि गर्नु उपयुक्त मानिदैन ।
ब्रम्हा मुहूर्तको महत्व
– यस समय सम्पूर्ण वातावरण शान्तिमय र निर्मल हुन्छ । यतिबेला सत्व गुणको प्रधानता रहन्छ ।
– ब्रम्हा मुहूर्तमा उठ्नाले सौन्दर्य, बल, विद्या, स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ । यो समय ग्रन्थ रचनाको लागि सर्वोत्तम मानिन्छ ।
– वैज्ञानिक शोधबाट पनि प्रमाणित भइसकेको छ कि ब्रम्हा मुहूर्तमा वायुमण्डल प्रदूषणरहित हुन्छ । यस समय वायुमण्डलमा अक्सिजन (प्राणवायु)को मात्र सबैभन्दा अधिक (४१ प्रतिशत) हुन्छ । यसले फोक्सोलाई शुद्ध बनाउँछ, मस्तिकलाई ताजा बनाउँछ, शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन मिल्छ ।
– आयुर्वेदले यस समय वहने वायुलाई अमृततुल्य मानिएको छ । ब्रम्हा मुहूर्तमा उठेर यताउता टहल्नाले शरीरमा संजीवनी शक्तिको संचार हुन्छ ।
– यो समय अध्ययनका लागि सर्वोत्तम मानिन्छ । यतिबेला स्मरणशक्ति बलियो हुन्छ । मस्तिष्कमा पनि स्फूर्ती रहन्छ । (अनलाइनखबर बाट सभार)